Iyo Apple Watch inoponesa hupenyu hwemunhu zvakare | Ndinobva mac
Apple Watch inoponesa hupenyu hwemunhu zvakare
Isu tinotanga gore neimwe yeaya mashoko atinoda uye ndeekuti iyo Apple Watch inoramba ichiita "basa" rayo nekuona kukwirira kwemoyo uye nezvimwe. Mune ino kesi ndeye murume akaona kuti Apple Watch yakamutumira sei a ziviso yeakakwira kurova kwemoyo, panguva iyoyo chaiyo zvaakaita akange akamira kutora kufamba kwaaiita ndokuenda kumba kunozorora. Asi zvinoita sekunge ari pamba akanyarara hazvina kushanda mushe uye pakupedzisira aifanira kuenda kuna chiremba uyo akamuwana aine chirwere cheBP uye tachycardia.
Hazvisi zvakajairika kuti uzviwane uchitora mafambiro ekuzorora uye uine kupomba 170/160 kana kukwira saka mune izvi zviitiko zvakanaka kuenda kunanga kwachiremba sezvakaitwa naJorge Freire Jr. Kubatwa uko kunotungamira chinyorwa ichi kuri pachena kuenda kuna chiremba wedu uye kunetseka nekuti kurova kwemoyo kwakanyanya kusaita chero rudzi rwekurovedza muviri, saka kuenda kwachiremba ndicho chisarudzo chakanakisa chaangaite panguva iyoyo Freire.
Pane ino chiitiko paakasvika kuchipatara vakamurapa nemishonga uye chirwere chemwoyo chakanzi kunze, chinhu chakanaka kwazvo kunyangwe paityisa. Paakange adzokera kumba Freire akatumira email kuApple yekutenda nezvakange zvaitika nekuonekwa kwetachycardia yake neBP, uko Tim Cook pachake akapindura kukorokotedza gore, ndichifara nekuti zvanga zvakanaka uye tichiti nyaya sedzako dzinovasundidzira kuti varambe vachishanda nesimba sezvaungaona mune yepamusoro skrini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch inoponesa hupenyu hwemunhu zvakare
Roma ichave nechitoro cheApple chitsva
Chenjerera. AppleJeus Malware Kugadziridza maMacs